रोनाल्डोद्वारा मार्सेलोलाई युभेन्टिस् अाउन अाग्रह, यो जोडीलार्इ फेरि एकसाथ देख्न पाउने सम्भावना कति? | Suvadin !
रोनाल्डोद्वारा मार्सेलोलाई युभेन्टिस् अाउन अाग्रह, यो जोडीलार्इ फेरि एकसाथ देख्न पाउने सम्भावना कति?
रोनाल्डोले युभेन्टसमा थप सफलताको लागि मार्सेलोलाई क्लबमा आउन आग्रह गरेको इटालियन पत्रिका टुटोस्पोर्टसले उल्लेख गरेको छ। लेफ्टब्याक मार्सेलो र सुपरस्टार रोनाल्डोबीचको सहकार्य रियलमा निक्कै सफल भएको थियो। तर, मार्सेलोको युभेन्टस् यात्रा भने असहज छ। किनभने युभेन्टससँग एलेक्स सान्ड्रोजस्ता खेलाडी छ। यदि सान्ड्रोलाई पिएसजी पठाउन सके मार्सेलोको युभेन्टस् यात्रा सहज हुनेछ।
Aug 09, 2018 13:06
काठमाडाैं, २४ साउन – पोर्चुगिज सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो पूर्व क्लब रियल मड्रिडका फुलब्याक मार्सेलोलाई युभेन्टस्मा आउनको लागि आग्रह गरेका छन्। अघिल्लो महिना १ सय मिलियन पाउन्डमा इटालियन क्लब युभेन्टस् पुगेका रोनाल्डोले युभेन्टसमा थप सफलताको लागि मार्सेलोलाई क्लबमा आउन आग्रह गरेको इटालियन पत्रिका टुटोस्पोर्टसले उल्लेख गरेको छ।
लेफ्टब्याक मार्सेलो र सुपरस्टार रोनाल्डोबीचको सहकार्य रियलमा निक्कै सफल भएको थियो। तर, मार्सेलोको युभेन्टस् यात्रा भने असहज छ। किनभने युभेन्टससँग एलेक्स सान्ड्रोजस्ता खेलाडी छ। यदि सान्ड्रोलाई पिएसजी पठाउन सके मार्सेलोको युभेन्टस् यात्रा सहज हुनेछ।
रोनाल्डोले पुर्वसहयात्री मार्सेलोलाई मनाउन प्रयास गरिरहेको र युभेन्टसले चाहेको खन्डमा एलेक्स सान्ड्रोलाई बेचेर मार्सेलो भित्र्याउन सक्ने टुटोस्पोर्टस्ले दावी गरेको छ। सान्ड्रोको मुल्य ३६ मिलियन पाउन्ड तोकिएको छ। उनी पिएसजी जान इच्छुक रहेको छन्।
मार्सेलो र रोनाल्डोले रियलमा ९ वर्ष सहकार्य गर्दा ४ ला लिगा, ४ च्याम्पियन्स लिग, ३ फिफा क्लब वल्डकप, ३ युइएफए सुपरकप र २ कोपा डेल रे जितेका छन्।